नेपाल टेलिकमद्वारा महत्वकांक्षी योजना सार्वजनिक, हाेलान पूरा ? – Everest Dainik – News from Nepal
नेपाल टेलिकमद्वारा महत्वकांक्षी योजना सार्वजनिक, हाेलान पूरा ?
काठमाडौं, साउन २७ । नेपाल टेलिकमले चालू आर्थिक वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्यसहित केही महत्वकांक्षी योजना सावृजनिक गरेको छ । टेलिकमले सेवा विस्तार र गुणस्तर सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर आइतबार योजना घोषणा गरेको हो ।
टेलिकमले पूर्वाधार विकास, वायरलाइन सेवा, जीएसएम, बीटीएस टावर निर्माण लगायतका कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो । आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै ती योजनाहरु कार्यान्वयनमा आउन थालिसकेको टेलिकमले जनाएको छ ।
प्रदेश १, २ र ३ को मध्य पहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर तथा उच्च क्षमतायुक्त उपकरण बिस्तारका लागि पाँचवटा बोलपत्र आह्वान भइसकेको टेलिकमले जनाएको छ । जसअन्र्तगत पाचँथरको चियो भञ्ज्याङदेखि गोर्खा–धादिङको आरुघाटसम्म २ हजार १७९ किलोमिटर अप्टिकल फाइवर नेठवर्क बिस्तार गरीने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
यस्तै चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाभित्र पहाडी जिल्लाका सदरमुकामहरुमा एक हजार किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिस्तार गरीसक्ने टेलिकमले जनाएको छ । जीएसएम मोवाइल सेवामा पोष्टपेड तर्फ ५९ हजार र प्रिपेड तर्फ २५ लाख ५० हजार मोबाइल लाइन वितरण गर्ने लक्ष्य टेलिकमको छ । यस्तै सीडीएमए प्रविधिका ८१ हजार र ल्याण्ड लाइनतर्फ ४२ हजार लाइन टेलिफोन वितरण गर्ने योजना टेलकमको छ ।
डाटाको माग बढ्दै गएकाले मुलुकका मुख्य शहरमा तीन लाख क्षमताको नेटवर्क बिस्तार गरी १ लाख ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गरिने पनि उल्लेख गरीएको छ । यसै वर्षभित्र ७७ वटै जिल्ला सदरमुकाम तथा प्रमुख ब्यापारिक केन्द्रहरुमा वाइफाई सेवा सञ्चालनमा ल्याइने महत्वकांक्षी योजना पनि टेलिकमको छ ।
यी सबै कार्यका लागि करीब २२ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसैबीच, गत आर्थिक वर्षमा टेलिकमले २ दशमलव १९ प्रतिशतले आम्दानी वृद्धि गर्दै ४५ अर्ब ५६ करोड ५८ लाख पुर्‍याएको छ । गत आर्थिक वर्षमा टेलिकमले १५ अर्ब ६६ करोड ७५ नाफा कमाएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ दशमलव ९६ प्रतिशतले बढी हो ।